तपाईं निद्रा पूरा हुने गरी सुत्नुहुन्न ? या दैनिक ७ घण्टा भन्दा कम सुत्नुहुन्छ ? यदि यस्तो हो भने ख्याल गर्नुहोस्, यसले तपाईंको मस्तिष्कमा नराम्रो असर पर्नसक्छ।
समय खवर । निद्रा हाम्रो शरीरका लागि अत्यन्त आवश्यक कुरा हो। यदि ७ देखि ८ घण्टासम्म सुत्नुहुन्छ भने मोटोपना, हृदयरोग, डिप्रेसनजस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। पूरै निद्रा नसुत्ने मानिसहरुले पछि गएर शारीरिक तथा मानसिक समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
कम निद्राका कारण प्रतिरोधी क्षमता कमजोर पर्नसक्छ भने मस्तिष्कमा असर पर्दा मानसिक समस्या पनि निम्तन्छ र शरीरमा विभिन्न रोगहरुले घर बनाउँछ। त्यसैले कम निद्राले कस्तो असर पर्छ त ?
निद्रा पुग्नेगरी नसुत्दा यसको असर दिमागमा पर्छ। सोच्ने र बुझ्ने क्षमता कमजोर हुन्छ। डिप्रेसनको कारक मानिएको मोटोपना बढ्छ। मुटु, दिमाग र तौलमा नकारात्मक असर पर्छ।
निद्रा नपुग्दाका दुष्प्रभाव :
निद्रा पूरा नहुँदा व्यक्तिले आफ्नै व्यवहारमा परिवर्तन आएको महसुस गर्नसक्छ। रिस उठ्ने र चिडचिडाहट ९इरिटेशन० हुने हुनसक्छ। व्यवहारमा परिवर्तन आएको महसुस भए पानी पिउने र श्वासप्रश्वासको अभ्यास गर्नुपर्छ।
३। स्मरणशक्ति कमजोर हुनु
४। ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने समस्या
कसरी पूरा गर्ने निद्रा ?
प्रकाशित मिति: मंगलवार, जेठ ३, २०७९, ०५:४८:३०
बिहिवार, भदौ २५, २०७७ समय खवर
मंगलवार, भदौ ९, २०७७ समय खवर